Shukulaatada Shukulaatada Recipe + Casharrada - Entremet
Muraayadda shukulaatada shukulaatada waa mid aad u qurux badan oo dhalaalaya! Had iyo jeer waxay sameysaa aragti cajiib ah waana dusha sare ee macmacaanka shukulaatada
Muraayadda shukulaatada shukulaatada waa daahan dhalaalaya oo laga sameeyay shukulaatada, budada kookaha, caano macaan oo macaan iyo gelatin. Markii lagu shubo macmacaanka la qaboojiyey, waxay dejineysaa dhalaal dhalaalaya oo aad u dhalaalaya si aad u dhalaalaya waxaad ku arki kartaa milicsigaaga dusha sare (haddaba magaca muraayadda muraayadda). Muraayadda muraayadda ma aha wax adag in la sameeyo laakiin waxay qaadataa dhowr tallaabo oo taxaddar ah oo aan laga boodayn karin si loo helo dhammaystirka ugu dhaldhalaalaya oo aan iin lahayn ee muraayaddaada muraayadaha shukulaatada ah.
Sida loo sameeyo muraayad shukulaatada dhalaalaysa
Sameynta muraayadda muraayadda waa quruxsan tahay laakiin waa muhiim in la raaco dhammaan tallaabooyinka ku jira cuntada. Kaliya ha ku tuurin wax walba dheriga oo rajee inuu soo baxo Waxaad ku dambayn doontaa isku dhac cufan oo buurbuur ah. Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso habka cuntada marka hore si aad u hubiso inaad haysato dhamaan maaddooyinkaaga oo diyaar u ah inay tagaan. Kadib akhri tilmaamaha si aad u ogaato waxa talaabooyinka xiga ay yihiin waxaadna haysataa dhamaan qalabka aad ubaahantahay inaad udiyaar garowdo sida mesh strainer mesh, heerkulbeeg, blender blender iyo wax aad kuqabsato dhalaalkaaga.
Si aad muraayaddaada shukulaatada uga dhigto mid dhalaalaya, ku dheji tiradaada ugu horreysa ee biyaha, sonkorta iyo caanaha macaan ee la galiyay digsi digsi oo isku kari. Shukulaatadaada iyo budada kookaha dhig baaquli weyn oo caddeyn kara kuleylka oo dhinac iska dhig.
Intaad sugeysid, gelatin ku saydhaa tirada labaad ee biyaha oo u oggolow inay nuugto.
Marka dareerayaashaadu ay yimaadaan isku kari, ku dar gelatin-kaaga oo walaaq ilaa ay gebi ahaanba dhalaalayaan.
Ka qaad kuleylka oo ku dar soosaaridaada vanilj.
Shubka ku shub shukulaatada iyo budada kookaha oo fadhiiso 5 daqiiqo.
Whisk ilaa isku darku inta badan jilicsan yahay ka dibna isticmaal miirahaaga isku-darka si aad uga saarto wixii buurbuur ah ee haray.
Ku shub walaaqda shaandhada mesh weel weyn si aad uga saarto wixii goobooyin ah iyo inta harsan ee gelatin ama shukulaatada aan la karin. Ha ka boodin tillaabadan ama ma yeelan doontid dusha sare ee dhalaalaya dhalaalka muraayaddaada shukulaatada.
Muraayadaada dhalaalka ha u qaboojiso 90 toF. Marmar ku walaaq si aad u hubiso inay si siman u qaboojiso. Haddii aadan sugin illaa ay ka qabowdo markaa dhalaalkaagu kaliya wuu ka dhammaan doonaa keega. Ha aad u qabow badan oo waxay noqon doontaa buruq.
Isticmaalka muraayad shukulaatada glaze on keega
Marka muraayaddaada muraayadaadu qabowdo waad ku shubi kartaa keegaaga. Waxaad ku isticmaali kartaa muraayadda shukulaatada dhaldhalaalka kareemka buttercream ilaa iyo inta buttercream la qaboojiyey saacad oo ay fiican tahay oo qabow tahay. Dadka badankood waxay u isticmaalaan muraayad shukulaatada muraayadda mooska sida 'Chocolate Heart Mirror Glaze Cake' laakiin tan darteed waxaad u baahan doontaa muraayadaha dhalada iyo in mouse si buuxda u barafoobo.
Marka muraayadda lagu shubay keega waxay dajin doontaa dhowr daqiiqo oo keliya. Mar alla markii la dejiyo, isticmaal mindi kulul si aad uga soo goyso faleebada oo aad si taxaddar leh ugu wareejiso keegga saxan si aad ugu raaxaysato isla markiiba ama aad u qaboojiso si aad hadhow ugu raaxaysatid. Kaliya maskaxda ku hay in muraayadda muraayadda lumiso ay tahay iftiin 24 saacadood ka dib markaa haddii aad rabto inay noqoto mid dhalaalaya, dhalaal maalinta dhalashada.
yezy burcad -badeed madow been abuur ah vs dhab ah
Maxaad ku qabtaa muraayadda muraayadda hadhay ee shukulaatada?
Waxaad dib u isticmaali kartaa muraayadda haraaga ah. Kaliya dib-ku-kululeyso microwave-ka oo u daa inuu u qaboojiyo 90ºF markale kahor intaadan shubin. Haddii aad rabto inaad dhalaaliso keegag fara badan hal mar sida caadiga ah waxaa sida ugu wanaagsan loo sameeyaa dhammaantood isla waqtigaas si loo yareeyo waqtiga ay ku qaadato in lagu dhalaaliyo dhalashada keegag badan. Had iyo jeer waxaa jiri doona qadar yar oo dhalaal ah oo aan la isticmaali karin dhamaadka.
Ma jeceshahay cuntadan? Fiiri cuntooyinkayaga kale ee muraayadaha muraayadda ah iyo casharradeenna!
Noqo My Valentine Mirror dhalaalay Wadnaha
Muraayadda Muraayadda Muraayada Badbaado ee Madadaalada (Sonkorta geek tus xubnaha kaliya)
Recipe Muraayada Muraayadaha (saldhig cad)
Recipe Muraayad Dahab ah
Muraayadda Shukulaatada Muraayadda Wadnaha
Sida loo sameeyo muraayad qurux badan oo dhalaalaysa keega! Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado qaboojinta:labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:10 daqiiqado Kalori:330kcal
▢350 garaam shukulaatada madow oo tayo wanaagsan leh
▢1 Tbsp soosaarida vanilj
Tilmaamaha Muraayadda Muraayadda Shukulaatada
Hubso inaad haysato qalabkan gacanta: Mesh mesh filterka, heerkulbeegga, blender blender
Ku dar shukulaatada iyo budada kookaha baaquli weyn oo caddeyn kara kuleylka oo dhinac iska dhig.
Ku daadi budada gelatin xaddiga labaad ee biyaha oo u oggolow ubax ilaa 5 daqiiqo.
Ku dhaji tirada ugu horeysa ee biyaha, sonkorta, caanaha macaan ee la kariyey digsi digsi oo isku kari ilaa kuleylka dhexdhexaadka ah.
Ku dar gelatin ubaxeed oo walaaq illaa gebi ahaanba dhalaalay oo ka saar dabka. Ku dar faniinkaaga.
Shubka ku shub shukulaatada / kookaha oo ha istaag 5 daqiiqo ka dib u dhig si aad isugu darsato. U isticmaal qashin-qumanka wax lagu shubo si aad uga saarto wixii ku haray ama shukulaatada aan la karin
Ku dhaji isku dar ah shaandhada mesh si aad uga saarto wax yar oo ka mid ah shukulaatada ama gelatin
U oggolow isku-darka qaboojiyaha 90ºF ka hor intaadan ku shubin keegaaga barafoobay. Dhig keegga barafoobay dusha baaquli ama digsi yar oo doolshe ah gudaha digsi weyn si aad u qabato muraayadda dheeriga ah. Ku jar faleebada mindi kulul una wareeji saxan. Ku raaxayso saacad gudahood ama qaboojiyaha. Maskaxda ku hay in dhalaalkaagu lumin doono iftiinkiisa 24 saacadood ka dib markaa haddii aad rabto inaad dhalaalayso, waxaan kugula talinayaa dhalaalida maalinta dhalashada.
U adeegida:1g|Kalori:330kcal(17%)|Kaarboohaydraytyada:72g(24%)|Protein:6g(12%)|Dufan:3g(5%)|Dufan Dufan:labag(10%)|Kalastarol:kow iyo tobanmg(4%)|Sodium:51mg(laba%)|Kaliumperyamper:225mg(6%)|Fiber:labag(8%)|Sonkor:68g(76%)|Vitamin A:90IU(laba%)|Vitamin C:0.9mg(1%)|Kaalshiyam:103mg(10%)|Bir:1mg(6%)
buche de noel yule log recipe
yaa lala anthony guursaday
dhammaan kabaha ken griffey jr
top 50 nba ciyaartoyda mar walba